Sendoso: Ku Dhiirrigelinta Ka Qeybgalka, Qaadashada, iyo Ku Haynta Boostada Tooska ah | Martech Zone
Markii aan ka shaqeynayey barxadda weyn ee SaaS, hal dariiqo oo wax ku ool ah oo aan horay ugu socon jirnay safarka macaamiisha waxay ahayd iyadoo hadiyad qaali ah oo qaali ah u dirno macaamiisheenna bartilmaameedka ah. In kasta oo kharashka macaamil kasta uu qaali ahaa, haddana maal gashigu wuxuu lahaa soo laabasho aan caadi ahayn oo ku saabsan maalgashiga.
Iyadoo safarka ganacsiga hoos u dhacay iyo dhacdooyinka la joojiyay, suuqleyda waxay leeyihiin xulashooyin kooban oo xadidan si ay u gaaraan rajadooda. Maaha in la xuso xaqiiqda ah in shirkaduhu ay wadaan qaylo badan iyada oo loo marayo kanaalka dijital ah. Boostada tooska ah ayaa awood u leh inay kor uga kacdo sawaxanka, iyadoo kor uga sii socota 30x heerka jawaabta ee emaylka.
Haddii aad ku mashquulsan karto dhagaystayaashaada dhiirigelinno raaxo leh, la taaban karo, iyo saameyn leh, safarka horay ayaad ugu sii wadi kartaa Sendoso waa bixiye adeegyadan - laga soo xulay badeecada, illaa otomaatiga, isdhexgalka macaamil, iyada oo loo marayo fulinteeda. Istaraatiijiyaddan waxaa loo yaqaan otomaatiga suuq geynta tooska ah.
Natiijooyinka waa kuwo cajiib ah, Macaamiisha Sendoso waxay gaareen:
22% kororka dakhliga halkii fursad
35% kororka ku-beddelka shirarka
60% heerka jawaabaha ee xirmooyinka la diray
450% soocelinta dakhliga kasoo xarooda heshiisyada la xiray
500% kordhinta heerarka dhow
Adoo adeegsanaya ansaxinta cinwaanka, Sendoso waxay kuu soo diri kartaa rajadaada ama macaamiishaada badeecad gaar ah, egift, wax halaabi kara, ama shey kasta oo ka baxsan Amazon. Barmaamijku wuxuu kaloo kuxiran yahay aalado otomaatig ah oo suuqgeyn ah, barnaamijyada kaqeybgalka iibka, CRMs, barnaamijyada kaqeybgalka macaamiisha iyo aaladaha ecommerce.
Tayaynta Safarka Iibsadahaaga
Awareness - u dir kaararka pop-up 3D, buugaagta xusuusta ee calaamadeysan, boorsooyinka cowska, xeedhooyinka la qaadan karo, ama waxyaabo kale oo yar yar oo swag ah si aad raadka ugu hesho
go'aan - si wax ku ool ah ula macaamil koontooyinkaaga bartilmaameedka adoo u diraya waraaqo soo dirayayaal ah ama jaakado tayo sare leh oo muujinaya astaantaada.
Tixgelin - Ku dhiirrigeli xiisaha iyo ujeeddada ka dhexeysa dhagaystayaashaada waraaqaha fiidiyowga ee caadiga ah ama macaamil macaan oo muujinaya astaantaada.
Dardar Dukaankaaga iibka
Tusaalooyinka qaar ee alaabta aad otomatig u diri karto dirista:
Furitaanka Albaabada - Fuula miiska qof halkii aad kula dagaallami lahayd sanduuqa ay ku jiraan shey shaqsiyan shakhsi ahaan ka soo jeeda Amazon oo leh qoraal gacmeed feker leh.
Xawaareyaasha wax ka qabashada - Adkee cilaaqaadka oo dhammeystir wadahadallada gorgortanka dhalo khamri ah oo lagu qaabeeyey astaanta shirkaddaada.
Kulan Sameeyayaasha - Ka hawl gal dad badan oo go'aan gaara hal mar adoo u diraya keega, buskudka, ama waxyaalo kale oo macaan oo xafiiska oo dhami wadaagi karo.
Adeegsiga Sendoso, oo ah shirkad softiweer ah oo khadka tooska ah uga hawl gasha,waxay awood u yeelatay inay dhisto $ 100M dhuumaha iyo $ 30M oo dakhli ah hal olole. Waxay u direen 345 xirmooyin akoonnada ABM, oo ay kujiraan kaarka hadiyadaha, daawaynta macaan, Wadarta guud ee Saameynta Dhaqaalaha, Wadarta soo koobitaanka fulinta guud, iyo qoraal gacanta lagu qoray.
Isdhexgalka wax soo saarka waxaa ka mid ah Salesforce, Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Pardot, Eloqua, Hubspot, Wacyigelinta, Salesloft, SurveyMonkey, Saamayn, Shopify iyo Magento.
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka barato sida 1: 1 suuq geynta shaqsiyeed u abuuri karto wacyigalin macno leh oo dhiseysa dhuumahaaga ka dambeeya COVID, codso demo Sendoso.
Codso Demo Sendoso
Tags: codkarnimohubspotWax saameyn lehmagentowacyigeliniibincafiska iibkaSalesfore Suuq CloudIibintadukaankaSurveyMonkey
VirBELA: Wadahadalka Virtual ee 3-Cabirka